သားဖေဖေက သားလူလေးကို ပြောပြသင့်သည့် စကား အခွန်း ၁၀ – TodayZ
ဖေဖေ့မှာ သားလေးတစ်ယောက်ရှိလာတဲ့အခါ သားကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဆုံးမစကားလေးတွေ ပြောရပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ မပါမဖြစ် ပြောသင့်တဲ့ စကား လေး ၁၀ ခွန်းကို `Best Shop4You´Page က မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
(၁) အားကစားလုပ်ပါ . .သားရေ🚶‍♂️⛹️‍♂️
အားကစားက သားကို ရိုးသားစွာ အနိုင်ယူဖို့၊ ဂုဏ်သရေရှိရှိ အရှုံးပေးတတ်ဖို့၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ် ယောက် အပြန်အလှန်လေးစားတတ်ဖို့၊ အခက်အခဲ ကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့၊ အချိန်တွေကို စီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့ ကောင်းကောင်း သင်ပေးမှာပါ။
(၂) ပျော်ပျော်နေတတ်အောင် ကြိုးစားပါ သား . .🕺
သင့်တော်တဲ့အချိန်မှာ ဟာသလေးတွေ ပြောတာ၊ ဟာသအမြင်နဲ့ ကြည့်ရှုသုံးသပ်တာတွေက အနာကျက်ဖြစ်စဉ်ကို အားကောင်းစေလို့ လောကဓံအဆိုးတွေကို သား ကျော်လွှားနိုင်မှာပါ။
(၃) အမြဲတမ်း ရိုးသားပါ၊ ရိုးသားမှုရှိပါ . .👨‍💼
ဘယ်တော့မဆို တိမ်ကောမသွားမယ့်အရာက ရိုးသားမှုပါ။ ကိုယ့်ဘက်က ရှုံးနေရင်လည်း သားရဲ့ ရိုးသားတဲ့ဂုဏ်ကို ဖေဖေ တန်ဖိုးထား လေးစားနေမှာပါ။ သားနိုင်ခဲ့ရင် တစ်ပါးသူအပေါ် ကြင်နာတတ်တဲ့ သားအပြုအမူအတွက် ဖေဖေ ဂုဏ်ယူနေမှာပါ။
(၄) ငွေစုပါ သားလေး👨‍🏫👨‍🎨👨‍🏭👨‍🔧
ငယ်ရွယ်ချိန်မှာ ငွေစုဆောင်းပါ သား။ တစ်နေ့နေ့မှာ အဲဒီငွေကို သုံးဖို့ လိုအပ်လာပါလိမ့်မယ်။
(၅) အိမ်အလုပ်တွေက သားနဲ့လည်း ဆိုင်တယ်👨‍🌾
သားယောက်ျားလေးဖြစ်ပေမယ့်လည်း အိမ်မှုကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့ ပန်းကန်ဆေးတာ၊ မီးပူတိုက်တာ၊ တံမြက်စည်းလှည်းတာ၊ အ၀တ်လျှော်တာ စတဲ့ အခြေခံ အလုပ်တွေကို တတ်မြောက်အောင် သင်ယူထားပါ။
(၆) အပြစ်မတင်ပါနဲ့ သားရေ🤓
သားရေ . .သူတစ်ပါးကို ဘယ်တော့မှ အပြစ် မတင်ပါနဲ့။ တိုက်ပွဲတစ်ခုကို ဘယ်တော့မှ ကိုယ်က မစတင်ပါနဲ့။ တချို့လူဆိုးတွေက သားကို ရန်စလာ ခဲ့ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ခွန်အားရှိနေ ပါစေ။
(၇) အချိန်ရသမျှ ပညာရှာမှီးပါ သား📖📚✍️
သားရဲ့ ဗဟုသုတနဲ့ ပညာက ဘယ်သူမှ ခိုးယူ လို့ မရနိုင်တဲ့အတွက် ပညာကို ရနိုင်သမျှ ရအောင် ရှာမှီးဆည်းပူးထားပါ။
(၈) သားမေမေ့လို အမျိုးသမီးတွေကို လေးစားတန်ဖိုးထားပါ သားလေးရေ🤹‍♂️
သားဘ၀မှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်းကို ကြင်နာပါ၊ လေးစားပါ၊ တန်ဖိုးထားပါ။ ဒါက သားကို ယောက်ျားကောင်းပီသတဲ့ အသွင် ဖြစ်စေမှာပါ။
(၉) ကိုယ့်လိင်အင်္ဂါကို တန်ဖိုးထားပါ ချစ်သား🤩
လိင်တံ၊ တင်ပါး စတဲ့ ကိုယ်ရဲ့ သီးခြားနေရာတွေကို ဖုံးအုပ်ထားပါ။ အများကြားမှာ ကုတ်တာမျိုးတောင် မလုပ်ပါနဲ့။ ယောက်ျားလေးပဲ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဆိုပြီး သူများလာထိတွေ့တာကိုလည်း လက်မခံပါနဲ့။
(၁၀) ဇနီးမယားကို ဥာဏ်ရှိရှိ ရွေးချယ်ပါ သားရေ💑
သားရဲ့ ဇနီးဟာ ဖေဖေမေမေတို့ရဲ့ ချွေးမလေးဖြစ်ပြီး သား၊ မြေးတွေနဲ့အတူ အချိန်အတော်များများ ကုန်ဆုံးမယ့် သူဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံးမိခင်ဖြစ်လာနိုင်သူကို နှလုံးသားနဲ့သာမက ဦးနှောက်နဲ့လည်း ရွေးချယ်သင့်တာပါ။